हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् - हेर्नुहोस् र्यापोर्ट
विश्व-स्तरीय निजीकृत समर्थन
२//24 ईमेल र कल सेन्टर
फोन र कुराकानी, वा इ-मेल मार्फत कुनै पनि समयमा तपाईंलाई सहयोग गर्न खोल्नुहोस् र तयार छ।
हाम्रो बहुभाषी टोली खरीद प्रक्रियामा तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपले मद्दत गर्न उपलब्ध छ
उच्च प्रशिक्षित विज्ञहरू
हामी स्टाफ शीर्ष पायरी विज्ञहरु जसले अनुभवको बर्ष संग राम्रोसँग तपाईलाई मद्दत पुर्‍याउँछन्
निजीकृत समर्थन २//24
२ 297 Kings किंग्सबरी ग्रेड, सुइट १०० लेक टाहो (राज्यरेखा) NV 100 89449 XNUMX
कार्यालय समय | ईमेल र कल सेन्टर २ 24/7 खोल्नुहोस्
सोमबार: am बिहान - pm बेलुका PST
मंगलवार: बिहान9बजे - बेलुका P बजे PST
बुधबार: am बिहान - pm बेलुका PST
बिहीबार: बिहान9बजे - बेलुका5बजे PST
बन्द: सप्ताहन्त र छुट्टीहरू
ग्राहक सेवा तथ्यहरू
१००,०००+ सन्तुष्ट समर्थन टिकाहरू
निजीकृत समर्थन सँधै समय
PASSIONATE ग्राहक सेवा
उच्च तालिम प्राप्त र अनुभवी
पर्दा पछाडि हेर्नुहोस् र वाच र्यापोर्टको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
कुन भुक्तानी विधिहरू उपलब्ध छन्?
यस समयमा, हामी केवल बैंक तार स्थानान्तरण र coinbase को लागी स्वीकार गर्दछौं
हाम्रो भुक्तानी को रूप को रूप crypotocurrency।
के बैंक तार स्थानान्तरण द्वारा अग्रिम भुक्तान विश्वसनीय छ?
हो। सुरक्षित तरीका भनेको वाच र्यापोर्टलाई सिधै भुक्तान गर्नु हो। हाम्रोलागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि वाच र्यापोर्टमा सबै सूचीबद्धहरू विश्वसनीय छन्। वाच रेपोर्टमा सबै विक्रेताहरूको पहिचान र वैधता दर्ता प्रक्रियाको बखत विस्तृत रूपमा समीक्षा गरिन्छ। अग्रिम भुक्तानीको विकल्पको रूपमा, तपाईं व्यक्तिगत रूपमा विक्रेतालाई सुरक्षित स्थानमा नगद भुक्तान गर्न र घडि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि वाच र्यापोर्टले बिक्रीको लागि कुनै जिम्मेवारी लिदैन।
के तपाइँ क्रेडिट वा डेबिट कार्डहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
होइन। दुर्भाग्यवस यस समयमा हामी क्रेडिट वा डेबिट कार्ड भुक्तानहरू स्वीकार गरिरहेका छैनौं।
के म एस्क्रो सेवा मार्फत खरीद गर्न सक्छु?
दूर्भाग्यवश होइन। हाम्रो व्यापार मोडेल यस समयमा एस्क्रो सेवा समर्थन गर्दैन। हामी विक्रेताहरूसँग सिधा सम्झौता गर्छौं र सुनिश्चित गर्दछौं कि हेर्ने रेपोर्टमा सूचीबद्ध सक्रिय हुनको लागि हाम्रा नियम र सर्तहरू पूरा भएका छन्। यो व्यवसाय मोडेलले खरिददारहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बेच्नेको सट्टा एउटा संस्थाको साथ सौदा गर्न अनुमति दिन्छ। हेर्ने र्यापोर्ट प्लेटफर्ममा भएका सबै लेनदेनहरूको लागि जिम्मेवार छ।